सकियो देउवा, प्रचण्ड र नेपालको भेटवार्ता, यस्तो भएको रहेछ छलफल ! - Everest Dainik - News from Nepal
सकियो देउवा, प्रचण्ड र नेपालको भेटवार्ता, यस्तो भएको रहेछ छलफल !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीचको भेटवार्ता सकिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ तीन शीर्ष नेताहरुको उक्त भेटवार्ता अहिले भर्खर सकिएको हो।
आज दिउँसो ४ बजे बस्ने भनिएको सत्ता गठबन्धन सम्मिलित पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकको पूर्व तयारीका लागि तीन नेताबीच वार्ता भएको हो।
तीन शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलपछि शुक्रबार दिउँसो ४ बजे सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले शुक्रबार दिउँसो ४ बजे बैठक बस्ने सहमति भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले बिहीबार बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताहरुको भेटवार्ता भएको भन्दै फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि क. माधवकुमार नेपाल शीर्ष तहको भेटमा आजदेखि सहभागी हुनुभयो। गठबन्धनको बैठक भोलि अपरान्ह ४ बजे बालुवाटारमा बस्ने निधो भएको छ।’
प्रचण्डले मंगलबारको संयन्त्र बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन ६ महिना सारेर आगामी वैशाख–जेठमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनको यो प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले पनि साथ दिएका छन्।
तर गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर केही नेताहरुले उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर देशमा संवैधानिक रिक्तता निम्त्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ।